Mangata-maso amin’ny fiangonana i Rajoelina	Isan’ireo nanakianan’i Andry Rajoelina ny fitondrana teo aloha ny fampifangaroana ny fitondrana ny fanjakana sy ny fivavahana.Nanaitra ny sain’ny mpanara-baovao politika ny fihetsiky ny filohan’ny fahefana avon’ny tetezamita tato ho ato.
Famangina ny fiangonana Anglikana Rodobe : tafita tamin’ny « kely maso » ny hafatra ! Mamaky ady amin’ny FJKM i Andry Rajoelina Auteur Solo Razafy*Publié le 24 août 2011Catégories Politique	4 pensées sur “Mangata-maso amin’ny fiangonana i Rajoelina”	elas dit :	24 août 2011 à 20 h 14 min	dia devoly ve no tonga nitokana ny fiangonana fivavahana ? kanefa efa fantatra fa tonga hijejo sy hisotrosotro no alehan’io devoly io.
KintanaMananDrambo dit :	24 août 2011 à 20 h 18 min	Izy mianakavy ihany no tao ry elas â ! Ny FJKM tsy nanatrika !
ranavalona dit :	24 août 2011 à 21 h 15 min	Dray re ry ilay lanitra o! hametaveta ireo fiangonana ireo no hataony any fa hanao inona moa??
mamisoa dit :	25 août 2011 à 5 h 12 min	Raha nibebaka izany izy dia ny fifonana tamin’i Przd Lala Rasendrahasina no nataony, fa satria samihafa ny Andriamanitr’izy sy Przd ny FJKM dia tsy mahagaga izao. Ohatra samihafa ny Jesosintsika sy ny an’i Randrianatoandro FPVM e! Nangalarin’ireo hatrany amin’ny tranon’Andriamanitra! Nandroba ny fananan’i Jehovah sy ny olon’i Jehovah izy, toy ny nagalarana ny fahefana teo am-pelatanan’i Filoha Ravalomanana, tsy nomena azy izany fa dia norobainy ary maro ny kristiana tsy mba namantatra fa tonga dia nandroba niaraka taminy ka nampianariny nangalatra ankolaka indray.
Précédent Article précédent : Video Tim Andoharanofotsy, 23 Août 11Suivant Article suivant : « tsy avelantsika raha tsy miverina amin’ny maha filoha azy Ravalomanana » »